Flight Pass 1.10 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.10 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Flight Pass ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တစ်ဦးပျံသန်းမှု Pass ကို အသုံးပြု. စာအုပ်ဆိုင်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: သင်ဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်တက်ကြွစွာပျံသန်းမှု Pass ကိုအကောင့်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးပျံသန်းမှု Pass ကိုအဘယျအံ့သြ? တစ်ဦးကလေယာဉ် Pass ကိုခရီးသွားအတှကျအသုံးပွုတလမ်းလေယာဉ်ခရက်ဒစ်၏ကြိုတင်ငွေဖြည့်အထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ http://flyac.ca/flightpass: ပျံသန်းမှုဤနေရာတွင်ကျော်ပြီအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
- ထိုပျံသန်းမှု Pass ကို App ကိုဖွင့်ဖော်ရွေတဦးတည်းလက်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, သင့်လက်မ၏အဖြစ်အနည်းငယ်သာ6အဖြစ်ဘုံဘိုင်အတွက်ဘွတ်ကင်တွေကိုဖြည့်။
- သင်သွားရှိရာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ, နှင့်ပျံသန်းမှု Pass ကို App ကိုသင့်ရဲ့ 'passes ၏တဦးတည်းသုံးစွဲဖို့ရာအကြံပြုပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုသှားဖို့လိုအပျသညျ့နရောသငျသညျအရနိုင်အောင်ကျနော်တို့ကထဲက guesswork ယူခဲ့ပါတယ်။
- လျင်မြန်စွာကြာချိန်, နေ့အချိန်အားဖြင့်မရရှိနိုင်လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှတဆင့် sorting အားဖြင့်စုံလင်သောလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုရှာပါ။
- ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်စာအုပ်? သင့်ရဲ့ကျမ်းစာရှိသမျှရုံသငျသညျကိုမျှော်လင့်ချင်ပါတယ်အဖြစ်ယခုလေယာဉ် Pass ကို app ထဲမှာပေါ်လာပါသည်။ သင်ရောက်ခဲ့ဖူးရှိရာအလွယ်တကူတွေ့မြင်နှင့်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ကိုနောက်တာပေါ့။
- ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်စာအုပ်အသေးစိတ်မျက်နှာပြင်ကနေလွယ်ကူခြင်းနှင့်သင်၏ကြိုတင်စာရင်းသွင်း cancel ။
- ကိုတိုက်ရိုက်လေယာဉ်ခရီးစဉ် Pass ကို app ထဲမှာ, သင့်ဘွတ်ကင်ပေါ်ကိုယ်အဘို့ထိုင်ခုံများနှင့်အခြားသူများကိုရွေးချယ်ပါ။ ပိုကောင်းတဲ့အစက်အပြောက်ကိုရှာပါ? သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံမယ့်အဖြစ်ကိုအလွယ်တကူမဆိုအချိန်မရွေးပြောင်းလဲပါ!
- လေယာဉ်ခရီးစဉ် Pass ကို app ကိုသီးသန့်: Preview ကိုမရရှိနိုင်ထိုင်ခုံသင်သည်စာအုပ်ဆိုင်မီ, သငျသညျစုံလင်သောထိုင်ခုံထွက်နယ်ပယ်နိုင်နိုင်အောင်။
သင့် upgrade GET
- complimentary အဆင့်မြှင့်ကမ်းလှမ်းတဲ့လေယာဉ် Pass ကိုအပေါ်ခရီးသွား? အဆိုပါလေယာဉ် Pass ကို App ကို (ကံကောင်းသငျသညျ!) တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့အဆင့်မြှင့်တောင်းဆိုခြင်း
AIR ကနေဒါ Mobile နဲ့ပူးပေါင်းခြင်း +
- အမြန်နှင့်လုံခြုံငွေပေးချေမှုအရောင်းအများအတွက် Air ကိုကနေဒါမိုဘိုင်း + မှသင့်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့အကြွေးကဒ်များကိုအသုံးပြုပါ။
- တည်နေရာ: သင့်တည်နေရာကိုဒေတာဘွတ်ကင်အဘို့အနီးဆုံးလေဆိပ်ပြသနိုင်ဖို့ကိုအသုံးပြုသည်။
ခလုတ်ကိုသို့မဟုတ် App ကိုဒေါင်းလုပ်များသို့မဟုတ်ဒီတော့အလိုအလျှောက်လုပ်ဖို့သင့်ရဲ့ device ကိုတက် setting များက "Install", သင် app ကို၏ installation ၎င်း၏အနာဂတ်နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်အဆင့်မြှင့်ရန်နှင့်အသုံးပြုမှုများ၏ app ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသဘောတူနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် ( "သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ" http://www.aircanada.com/en/mobile/tc_android.html:) ဒီနေရာမှာရရှိနိုင်ပါသည်သော app ကိုအသုံးပြုခြင်းအုပ်ချုပ်။ သင်က app ကို uninstall လုပ်နေဖြင့်မည်သည့်အချိန်ကသင့်ရဲ့သဘောတူညီခကျြထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ app ကို uninstall လုပ်အကူအညီနဲ့ဘို့, android@aircanada.ca မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျမှန်ကန်သော software ကိုအစေခံအဖြစ်က၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ device ကိုအကြောင်းကိုဒေတာစုဆောင်း; ဒီ app ကိုဒေါင်းလုပ်သို့မဟုတ်အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည် Air ကိုကနေဒါစေခြင်းငှါနားလည် သငျသညျတိကျတဲ့ features တွေသုံးစွဲဖို့သင့်ရဲ့ device ကို setting များကိုအချို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်; ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီအတွက်အသေးစိတ်အဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, http://www.aircanada.com/en/about/legal/privacy/policy.html ကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး
Air ကိုကနေဒါ, PO Box 64239, RPO Thorncliffe, Calgary, Alberta, T2K 6J7 privacy_vieprivee@aircanada.ca
Flight Pass အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Flight Pass အား အခ်က္ျပပါ
mystore778 စတိုး 14 10.53k
APK အေၾကာင္း Flight Pass အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.10
ထုတ်လုပ်သူ Air Canada
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.aircanada.com/en/about/legal/privacy/policy.html
လက်မှတ် SHA1: 37:BB:03:43:C9:71:9C:55:52:C7:DD:AE:8A:C2:CC:E7:90:56:69:3F
Flight Pass APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ